विश्वकै प्रशंसित महिलाहरूको सूचीमा भारतीय नायिकाहरु शीर्ष स्थानमा,एश्वर्या , प्रियंका र दीपिकाले गरे यस्तो कमाल - Gaubesi khabar
विश्वकै प्रशंसित महिलाहरूको सूचीमा भारतीय नायिकाहरु शीर्ष स्थानमा,एश्वर्या , प्रियंका र दीपिकाले गरे यस्तो कमाल
काठमाडौं । बलिउड नायिका एश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा र दीपिका पादुकोणलाई २०१८ सालको विश्वको नै सबैभन्दा बढी प्रशंसा गरिने महिलाहरूको रूपमा घोषित गरिएको छ ।
उनीहरुले एन्जिलिना जोली, मिशेल ओबामा, ओपरा वाइनफेरी र धेरै अन्य प्रसिद्ध महिलाहरुको साथमा आफूलाई खडा गरेका छन् । यस्तै एन्जेलिना जोली १ नम्बरमा छन् भने एश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा र दिपीका पादुकोण क्रमशः संख्या २, ३ र ४ मा छन् ।
Yougov द्वारा र मानिसहरूको बीचमा, माइक्रोसफ्टको अध्यक्ष बिल गेट्स २०१८ को सबैभन्दा बढी प्रशंशित सूचीमा सूचीबद्ध छन् र यस्तै पूर्व यू.एस. बराक ओबामाले दोस्रो स्थान पाएको छ । साथै पोप फ्रान्सेन्स र यू.एस. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पले क्रमश १६ औं र १७ औं स्थानमा छन् ।M
Be the first to comment on "विश्वकै प्रशंसित महिलाहरूको सूचीमा भारतीय नायिकाहरु शीर्ष स्थानमा,एश्वर्या , प्रियंका र दीपिकाले गरे यस्तो कमाल"